Pogba oo RIKOODH cajiib ah kasoo barbareyn kara Cristiano Ronaldo kulanka caawa ee Newcastle United – Gool FM
Pogba oo RIKOODH cajiib ah kasoo barbareyn kara Cristiano Ronaldo kulanka caawa ee Newcastle United
Dajiye January 2, 2019
(Manchester) 02 Jan 2019. Manchester United ayaa caawa oo arbaco ah booqan doonta garoonka kooxda Newcastle United ee St James’ Park, si ay u wada ciyaaraan kulankooda 21-aad ee horyaalka Premier League.
Kooxda Red Devils ayaa caawa dooneysa inay gaarto guusheeda 4-aad ee xiriir ah, tan iyo markii uu shaqada tababarka si ku meel gaar ah ula wareegay Ole Gunnar Solskjær.
Hadaba Paul Pogba ayaa caawa noqon kara laacibka labaad ee dhaliya min 2 gool kulankiiba, in ka badan 3 kulan ee xiriir ah kooxda Manchester United kulamada horyaalka Premier League, tan iyo Cristiano Ronaldo oo sidaas sameeyay bishii December ee 2006-dii.
Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay min 2 gool saddex kulan ee xiriir ah horyaalka Premier League inta uu ku sugnaa kooxda Manchester United, wuxuuna sidaas sameeyay kulamada kala ah Aston Villa (3-0), Wigan Athletic (3-1) iyo Reading (3-2) xilli ciyaareedkii 2006-2007.
Solari oo ka hadlay go’aankiisa kaga aadan iibinta Keylor Navas, isagoo dhinaca kale amaanay Isco
ARAG: Sida ay u muuqan doonto SHAXDA Chelsea kaddib markii uu ku soo biiray Christian Pulisic (Hazard haddii uu joogo iyo haddii kalaba)